OsoteMapi | Keynotes: Ọdịnihu nke ractdọta & Idebe Onyinye Ndị Kachasị Mma
Ọdịnihu nke Na-adọta & Idebe Top talent
Usoro, usoro ikpe, na echiche okike banyere ịnwetara na ijigide nka
Nyocha nke Fortune 500 CEO kwupụtara na ọbụlagodi afọ nke robot, ha na-eme atụmatụ ịga n'ihu na-achọ ma na-akpọ ndị mmadụ nke ọma na 2020 na karịa. Asọmpi a na-adọta ndị mmadụ n’ọsọ, ọ na-agbago ngwa ngwa, a na-ewe ndị mmadụ n'ọrụ ma na-azụ ndị ọrụ aka ka ha na-abịaru nso ma na-akụ ha. Na mgbakwunye na mmụba nke ohere efu na onye ọchụnta ego nke puku afọ na-eme ka nchọta talent bụrụ ihe siri ike karị.
Kedu ihe ụlọ ọrụ nwere ike ime? Kedu ihe ndị isi kwesịrị ime iji merie agha ahụ maka talent?
N’ime mkpuru okwu a, ị ga - amuta otu esi esepụta usoro na ịhazi etu esi adọta ndị dị elu na otu esi ejigide ha ogologo oge karịa ọkara oge.
Ihe omuma ohuru maka ulo oru gi banyere ihe n’abia n’uche banyere odia na inagide ikike di elu
Nghọta n’ime eziokwu dị ugbu a banyere ịchọta na idobe ezigbo ndị mmadụ stats na omume kachasị mma
Echiche ohuru maka ichota ndi mmadu kwesiri ekwesi nke diri ulo oru gi
Echiche okike na ihe atụ sitere n’aka ụlọ ọrụ ụwa niile na-emeri agha ahụ maka onyinye
Iri 'ndị na-adọta' ihe kacha na talent chọrọ mgbe ha na-achọ ịrụ ọrụ maka ụlọ ọrụ
Otu esi abụ ụlọ ọrụ nke 'na-adọta' talent, gụnyere inwe ndị isi mgbanwe na imepụta ọdịbendị na-elekwasị anya na idu ndú nwere njikọ
Isi ihe mere ndị mmadụ ji ahapụ onye were ha n'ọrụ na otu esi emezi ya
Nghọta ka ukwuu nke ihe mere itinye ego na iwe naanị bụ ụzọ enweghị mmeri
Ngwọta ihe okike nke ị nwere ike itinye ozugbo ozugbo iji mee ka mmeri gị dị n’ịdọta na idobe talent kachasị
Cheryl Cran abụghị Sheryl Crow ma ọ bụ kpakpando na-enweghị atụ ọ bụla! Anyị nwere Cheryl dịka onye isi okwu okwu mmechi anyị maka usoro mmemme maka ndị otu anyị. Cheryl sooro anyị rụọ ọrụ ihe karịrị iri na abuo ebe ọ nyefere ya ihe dịka ndị isi 6000 na ndị otu ga-eme n'ọdịnihu. Ikike ya iji kpaa na ozi nke ndị ọzọ na-eweta ya, ikike ya iso ndị otu ahụ na-eme ihe ọchị, na-atọ ọchị, eziokwu na nke na-akpali agụụ mmekọahụ bụ ihe ịtụnanya na KWES whatR what ihe anyị chọrọ dịka nso ihe omume anyị.